Izicwangciso zezifundo: Iinyanda-iSiseko soMvuzo
Ikhaya Izicwangciso zesifundo sasimahla Izicwangciso zezifundo: Iinyanda
Ukubonelela abafundi bakho ngeyona nto ifanelekileyo yokufunda ngeenxa zonke malunga ne-intanethi kunye nokuthumela imiyalezo ngefowuni, sincoma ukuba usebenzise inqwaba yezifundo.
Ukuvavanya umxholo wesifundo ngasinye, cofa kumfanekiso oyinyanda. Ukuba unqwenela ukuba nesixokelelwano sezifundo kwi-intanethi kuphela okanye ekuthumeleni imiyalezo kuphela, jonga inqwaba efanelekileyo engezantsi.
Izifundo ziyafumaneka kuhlelo lwase-UK, uHlelo lwaseMelika kunye noHlelo lwaMazwe ngaMazwe (lwesiNgesi).
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi kunye nokuThumelelana iziqwengana, eNgilane
£0.00 Yongeza kwibhaksi
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi kunye nokuThunyelwa kwemiyalezo ethunyelweyo, iiWales
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi kunye nokuThunyelwa kweeseyile, eScotland
Imifanekiso engamanyala kwi-Intanethi kunye nokuthumela imiyalezo ngeSMS
Imifanekiso engamanyala e-Intanethi kunye ne-Bundle ye-Sexting, i-American Edition
Amanyala e-Intanethi e-Intanethi
Imixokelelwano yephonografi ye-intanethi iqulethe izifundo ezintathu ezijongana nemiba eyahlukeneyo yamanyala. Songeze kwisifundo sebhonasi sasimahla nayo.
Ngaba iphonografi iyingozi? Inxalenye yokuqala sisifundo esimnandi nesisebenzisanayo apho abafundi basebenza njengegqwetha ukuze bavavanye iziqwenga ezisibhozo zobungqina ngokuchasene nazo, ezivela kuluhlu olubanzi lwemithombo kubandakanya neyonyango, ngaphambi kokufikelela kwisigqibo esineengqiqo. Iluncedo ekuboniseni abahloli bezikolo nabazali.
Inxalenye yesibini ijonge ngqo kwiziphumo zempilo engqondo yamanyala kunye nendlela ekuchaphazela ngayo ukufikelela kunye nokuzithemba. Ikwajonga kwakhona kumzi-mveliso wephonografi wezigidigidi zeedola kunye nokwenza kwayo imali xa iimveliso zayo (ikakhulu) zisimahla.
Icandelo lesithathu liphanda ukuba yintoni eyenza ulwalamano olusenyanisweni kubudlelwane. Umkhwa we-porn unawuphi umphumo kwimvume, ukunyanzelwa, ukulindelwa kunye nokusebenza ngokwesondo?
Isifundo sebhonasi sihlaziyo lwentetho eyaziwayo yeTEDx ebizwa ngokuba yi "The Great Porn Experiment" enceda abafundi ukuba baqonde indlela inzululwazi ephanda ngayo imisebenzi yezentlalo njengasimahla, ukusasaza iphonografi kwi-intanethi kunye nokuba le ndlela inkulu kangaka, engalawulwayo kwezentlalo ichaphazela njani impilo yezesondo. Icacisa isayensi ngendlela efikeleleka kakhulu kwaye inika ithemba kwabo babanjiswe ngumnqweno we-porn.
Ngokudibeneyo bagubungela izinto ezininzi eziphambili ngokusekwe kubungqina bamva nje obuvumela ukuxoxwa kwezi zihloko zinzima kwindawo ekhuselekileyo.
Inxalenye yamanyala e-Intanethi
Inyanda ye-Intanethi ye-Intanethi, uHlelo lwaMazwe ngaMazwe
Iphakheji yamanyala e-Intanethi, uHlelo lwaseMelika
Ukuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni yinto eyahlukileyo kunokubonakala ekuqaleni. Le bundle ivumela ootitshala ukuba baphonononge imiba eyahlukeneyo kunye nabafundi ngaphezulu kwezifundo ezithathu kwindawo ekhuselekileyo enethuba elaneleyo lokuxoxa kunye nokufunda.
Kuhlelo lwase-UK, sine-3-part bundle. Inxalenye yokuqala ithatha abafundi ngeendlela ezahlukeneyo zokuthumela imiyalezo nge-sext, ibuza malunga nemingcipheko kunye nembuyekezo, kunye nendlela yokungahoyi izicelo. Inxalenye yesibini ifundisa abafundi malunga neempawu ezizodwa zobuchopho babo bokufikisa, kutheni le nto inomdla kuzo zonke izinto zesondo kubandakanya iphonografi, ukuthumela imiyalezo kunye nokuthatha umngcipheko. Inxalenye yesithathu ijongana nokuba loo mngcipheko wokuthumelelana imiyalezo nemifanekiso yamanyala ngefowuni ujongeka njani ngokwembono yomthetho. Uziphatha njani umthetho wokuthumela imiyalezo ngefowuni kwilizwe lakho? Ifuthe lini elinalo kwimisebenzi ezayo ukuba uxelwe emapoliseni?
Ngenxa yokungafani komthetho kwamanye amazwe, uhlelo lwaseMelika nolwamanye amazwe alunalo icandelo lesithathu lomthetho. Ezo bundle zinamacandelo amabini ekuthumeleni imiyalezo nemifanekiso yamanyala. Nangona kunjalo besongeze kwisifundo sebhonasi simahla kwi-intanethi ye-intanethi, ebizwa ngokuba yi "The Great Porn Experiment" esekwe kwintetho eyaziwayo yeTEDx.
Ukuthumela i-Bundle eNgilane
Ukuthumela I-Bundle Wales
Uthumelo lweBundle eScotland
Ukuthunyelwa kwemiyalezo ethunyelwayo nge-Sexting, uHlelo lwaseMelika
Ukuthunyelwa kwemiyalezo yokuThumela imiyalezo ngeSms, uHlelo lwaMazwe ngaMazwe